उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावका लागि चन्द्र ढकाल नेतृत्वको प्यानल घोषणा – Himalaya Television
उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावका लागि चन्द्र ढकाल नेतृत्वको प्यानल घोषणा
२०७७ असार ३० गते १८:४५
३० असार, २०७७ काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आफ्नो प्यानलको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ ।
राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार ढकालले आफ्नो प्यानलको उम्मेलवारी घोषणा गर्नुभयो । उम्मेदवारी घोषणासभामा ढकालले कोरोनाबाट सिर्जना भएका चुनौतीहरु परास्त गर्दै आर्थिक रुपमा समुन्नत नेपाल बनाउने अभियानमा सधै काम गर्ने बताउनुभयो ।
आफ्नो समूहमा अनुभव र विश्वासले खारिएका व्यवसायीहरु रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न सधै साथमा रहने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले अध्यक्षका दाबेदार शेखर गोल्छाको भूमिका प्रति भने आपत्ति जनाउनुभयो । बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान कायम राख्न आफुले खेलेको भूमिका गोल्छाले भूलेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव किन पारित गरेका थियौँ र त्यसको मर्मलाई अहिले कसले मार्दै छ ? त्यो के का लागि ? केही महिनाअघि नेतृत्वमा बसेका साथीहरुले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्दा त्यो प्रावधान हटाउनु हुँदैन भनेर कसले लबिङ गरेको थियो ? भविष्यमा हामी जे गरौला गरौँला अहिले बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नै अध्यक्ष पाउनुपर्छ भनेर ठूलै मिहेनत नगरेको भए सायद आज चुनाव फरक हिसाबको हुन्थ्यो होला । यो कुरा हेक्का राख्नुपर्छ ।’’
ढकालले आफ्नो प्यानलले विजयी हुने दाबी गर्दै त्यसपछि गोल्छा नेतृत्वलाई सघाउन तयार रहेको प्रष्ट पार्नुभयो । ढकाल समूहबाट जिल्ला/नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी, वस्तुगत उपाध्यक्षमा वर्तमान उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ, एशोसिएट उपाध्यक्षमा रामचन्द्र संघाई उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
साउन २६ र २७ गतेबाट हुने महासंघको चुनावी अधिवेशनमा बरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि किशोर प्रधानले पनि आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यद्यपी अहिलेसम्म प्रधान समूहको उम्मेदवारी घोषणा भएको छैन् ।
उद्योग चन्द्र ढकाल महासंघ